Igumbi lokulala elimangalisayo B&B + indawo yokupaka yasimahla
Ihotele encinci iPrague Sweet Home ilungelelaniswe kwikhaya losapho, elikweyona ndawo iluhlaza kunye neyona ndawo imnandi yasePrague 4 - Pisnice. Ukusuka ekhaya ukuya kumbindi wePrague (iWenceslas Square), yimizuzu engama-30 kuphela ngezithuthi zikawonke-wonke (imizuzu eli-16 ngebhasi kunye nemizuzu esi-8 ngemetro) kwaye ubuninzi bemizuzu eli-15 ngemoto. Ukusuka kwindlu ukuya kwisikhululo sebhasi - i-5 min. hamba kwisitrato esizolileyo kungekho tshintsho kunye nokugcwala kwabantu.
Kuyathakazelisa, kuthambile kakhulu, kufakwe iithowuni eziorenji ezithambileyo, igumbi №1 lihle kakhulu kangangokuba umntu akafuni kuphuma. Iqulethe ibhedi enkulu ephantsi ephantsi, iitafile ezisecaleni kwebhedi, i-wardrobe enesibuko kunye nebhokisi ekhuselekileyo, itafile yekofu kunye nebhedi ekhululekile yesofa. Igumbi lokulala linendawo yalo yokuhlambela ebanzi kwaye entle kakhulu.
Iifestile zikhokelela kwiimbono zomfundisi wedlelo kunye nezindlu ezintle zaseCzech zabucala.
Iindleko ezongezelelweyo kwindawo enye eyongezelelweyo kumntwana omnye ongaphantsi kwe-12: 10 EUR / ubusuku.
Iindleko ezongezelelweyo kwindawo enye eyongezelelweyo kumntu omdala omnye: 20 EUR / ubusuku.
Yintoni iPrague eSweet Home kwaye kutheni ilapha ilungile kwaye inomphefumlo?
Kuba apha awusoze uzive unesithukuthezi kunye nokungakhuseleki abantu ngamanye amaxesha bakuva kwizixeko ezingaqhelekanga. Kuba nangaliphi na ixesha ungathembela kuncedo lwethu lobuhlobo kunye nesandla sokunceda.
Ihotele encinci ithatha wonke umgangatho wesibini wendlu. Kumgangatho ophantsi wehotele kuhlala usapho lwabanini babantu abathathu kunye nezinja ezimbini ezihlekisayo ezivuyayo (i-pug kunye neLabrador). Izinja azikwazi ukufikelela kumgangatho weendwendwe kunye negadi yeendwendwe. Azikhonkothi kwaye azingxoli, akukho nelincinci ivumba lezinja apha endlini.
Kukho indawo yokungena endlwini enye, ukusuka kwipaseji ephangaleleyo ngezinyuko ezincinci zeendwendwe zethu zingena emgangathweni wazo. Uya kufumana izitshixo esangweni, phambi komnyango wangaphambili ukuya endlwini nakwigumbi lakho, kunye nesitshixo esinefowuni yomninimzi xa kunokwenzeka.
Kwisayithi, kukho indawo yokupaka, phambi kwendlu, unokupaka iimoto ezi-1-2. Ngexesha lasehlotyeni, siya kwakha igaraji yethu kwiimoto ezi-2, iya kunikwa neendwendwe.
Emgangathweni kukho igumbi lokuhlala elikhulu (eliqhelekileyo kuzo zonke iindwendwe), iholo elibanzi, amagumbi okulala ama-2 kunye nebhloko eyahlukileyo yentsapho enkulu enabantwana okanye iqela labahlobo.
Ungarenta elinye lamagumbi ngokuthanda kwakho okanye ngoko nangoko umgangatho uphela. Ngokunjalo nePrague Sweet Home iya kuba lula kakhulu kuhambo lweshishini kunye notyelelo lweshishini.
Inani eliphezulu leendwendwe zabantu abadala (ezibonelelwe ngokusetyenziswa kwezihlalo ezisongelwayo kunye nesofa kwigumbi ngalinye kwibhloko yeendwendwe) ngabantu abayi-11. Igumbi labantwana lenzelwe abantwana ukusuka kwi-2 ukuya kwi-8-10 iminyaka.
Onke amagumbi anezindlu zawo zokuhlambela. Indlu ishushu, ukufudumeza kulungelelaniswa. Onke amagumbi angena umoya ngokufanelekileyo. Ehlotyeni, akuxutywanga endlwini, inethi zeengcongconi zifakwe kwifestile nganye. Akukho moya-moya, sinika abalandeli phantsi kweemeko zemozulu ezishushu. Kukho izixhobo zokujonga umsi. AKUKHO iikhamera zevidiyo kulo naliphi na igumbi.
Rhoqo kusasa ngentsimbi yesi-7 ukuya kweyesi-9 kusasa sibonelela iiNdwendwe zethu ngesidlo sakusasa esenziwe ekhaya esinesondlo. Ngosuku olungaphambi kokuba undwendwe ngalunye lukhethe kwimenyu ebanzi into angathanda ukuyifumana ngesidlo sakusasa ngentsasa elandelayo. Imenyu ibandakanya izitya zabantwana kunye nemifuno. Sinokukhetha kakuhle iziselo ngokunjalo - amabanga ahlukeneyo eti, ikofu, ikokho, itshokolethi eshushu, ubisi, ikefir (ibhotolo), iijusi, amanzi amaminerali.
Ukupheka ngokuzimeleyo akwamkelekanga. Umkhethe unokwenziwa kuphela xa urenta umgangatho wonke liqela elinye.
Kuhlala kukho ithuba lokuodola isidlo sangokuhlwa ekhaya kwindawo yokutyela ekufutshane yaseCzech, kunye nepizza kunye neziselo.
Ukutshaya kwindawo akuvumelekanga ngokungqongqo. Ukutshaya kuvunyelwe kwibalcony kunye nocango oluvaliweyo, okanye kwisiza usebenzisa i-ashtrays enikeziweyo.
Zonke iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise igadi yeendwendwe, apho kukho indawo yebarbecue, ifenitshala yegadi, iibhedi zelanga. Ukuba unqwenela, iindwendwe zinokuodola inyama entsha efama kwaye zibe netheko.
- iVAT kunye nerhafu yesixeko;
-Wi-Fi kuwo onke amagumbi omgangatho weendwendwe;
- isidlo sakusasa;
- iilinen (ukutshintsha zonke iintsuku ezi-3);
- ukucoca imihla ngemihla;
- iitawuli (utshintsho - ngesicelo);
-iphepha lendlu yangasese, ishampoo, i-conditioner, isepha, izipontshi zokuhlambela, izomisi zeenwele, izifudumezi zomoya kwigumbi lokuhlambela, uboya bekotoni, icotton buds;
- iibhokisi ezikhuselekileyo zokugcina izinto ezixabisekileyo;
- inkonzo yokuvuka;
- ukusetyenziswa kwendawo yokupaka;
- ukusetyenziswa kwendawo.
Ihotele encinci iPrague Sweet Home ilungelelaniswe kwikhaya losapho, elikweyona ndawo iluhlaza kunye neyona ndawo imnandi yasePrague 4 - Pisnice. Ukusuka ekhaya ukuya kumbindi wePrague (iWenceslas Square), yimizuzu engama-30 kuphela ngezithuthi zikawonke-wonke (imizuzu eli-16 ngebhasi kunye nemizuzu esi-8 ngemetro) kwaye ubuninzi bemizuzu eli-15 ngemoto. Ukusuka kwindlu ukuya kwisikhululo sebhasi - i-5 min. hamba kwi…
Kuphela yimizuzu engama-30 emva kokuhamba esixekweni esinengxolo-kwaye uzifumana ukwindlu entle yokuhlala kwindawo entle eluhlaza, indawo yokuzola noxolo. Kulapha apho uphumla ngokupheleleyo kwaye ukonwabele umoya ofudumeleyo wasekhaya.
Ikhaya elimnandi lasePrague liyinxalenye ye-Arhente yokuHamba yaseCzech, uZlaté Kolo. Kwaye oku kuthetha ukuba iindwendwe zehotele encinci zinethuba lokuzuza kwiindidi zeenkonzo ezongezelelweyo: - ukudluliselwa ukusuka / ukuya kwisikhumulo sezindiza (i-20 euro enye indlela);
- ugcino lokuqala lweendawo zokutyela (simahla);
- iodolo yamatikiti emidlalo yeqonga (simahla);
- irenti yemoto esetyenziselwa undwendwe lomntu;
- iteksi enomrhumo okhethiweyo (ngaphandle kwentlawulo);
- ukulungiswa kweenkqubo zengqondo kunye nokuzonwabisa kunye nendawo echanekileyo yezinto kunye nemephu yokufikelela (ngomrhumo, kuxhomekeke kubunzima beprogram);
- ukhenketho ePrague kunye nohambo olungaphandle kwenkunzi, ngeelwimi ezahlukeneyo ezibandakanya izikhokelo ezinelayisenisi (kuxhomekeke kwixesha lokutyelela, kwindawo, imfuno yerenti yezothutho, njl.). Ugcino-ndawo lokhenketho olukhokelwayo lwenziwa kwizicelo zokuqala kunye nenxenye yentlawulo yekhadi;
- umbutho weziganeko zomntu - ukubonelela kunye nokuhanjiswa kweentyatyambo, imihla yokuzalwa, izidlo zothando, iindibano, izikhumbuzo, njl. (ngentlawulo, kuxhomekeke kubunzima bentlangano);
- ukubonelela ngoluhlu lweziganeko ezinomdla kakhulu ezenzeka ngeli xesha ePrague, iikonsathi, imiboniso, imikhosi yendabuko, imiboniso, njl. (ngaphandle kwentlawulo);
- ugcino lweehotele ekuchithelwa kuzo iiholide, uhambo olubuyayo, inkqubo yokuqonda kufutshane nendawo ekuchithelwa kuyo iiholide (ngomrhumo);
- ukubonelela lonke ulwazi oluyimfuneko kunye noncedo xa u tyelela ePrague - izinto ezikhangayo, iimyuziyam, ezothutho, iivenkile kunye namaziko okuthenga, ukuthengisa, izikhumbuzo, iiofisi zokutshintshiselana ngemali ethembekileyo, iivenkile, ii-pubs, njl (ngaphandle kwentlawulo).
Ikhaya elimnandi lasePrague liyinxalenye ye-Arhente yokuHamba yaseCzech, uZlaté Kolo. Kwaye oku kuthetha ukuba iindwendwe zehotele encinci zinethuba lokuzuza kwiindidi zeenkonzo ez…